DAAWO: Qarax nukliyeer u qaab eg oo ka dhacay Bayruut & isbitaallada oo ay dhaawacyadu qarqiyeen | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Qarax nukliyeer u qaab eg oo ka dhacay Bayruut & isbitaallada...
DAAWO: Qarax nukliyeer u qaab eg oo ka dhacay Bayruut & isbitaallada oo ay dhaawacyadu qarqiyeen
(Bayruut) 04 Agoosto 2020 – Qarax wayn oo leh wax u eg mowjadaha wax ruxa ee nukliyeerka ayaa ka dhacay caasimadda Lubnaan ee Bayruut, kaasoo gaystey khasaare ballaaran.
Ma cadda waxa khasaarahan sababay ilaa haatan, balse wuxuu ka dhacay agagaarka dekedda magaalada waxaana la sheegayaa inuu yahay shil caadi ah oo shidaal ku shuqul leh, waxaana muuqaallo meesha laga soo duubay laga arki karaa uuro iyo holac mar qura is qabsanaya.
Isbitaallada ayaa la sheegay in dhaawacyadu ka saa’id caleeyeen, waxayna arrintani kusoo beegantay jeer uu meel xun marayo dhaqaalaha dalkaasi.
Arrintan ayaa sidoo kale kusoo beegantay xilli la sugayo xukunka khaarajintii RW hore ee Rafiiq Xariiri oo isla Bayruut lagu qarxiyey 2005-tii. Maxkamad ay maamusho QM ayaa waxaa saaran 4 eedaysane waxaana xukunka la sugayaa Jimcaha.
Reuters ayaa sheegaysa in ugu yaraan 10 qofood oo mayd ah laga soo saaray dhismayaal bur buray.
Previous article”Waxaan tababaraynaa 1/3 ka mid ah Xoogga Dalka Somalia” – Turkiga oo ka hadlay qorshe soconaya kaddib bixtaanka AMISOM & waxa ka jira ciidamo la gaynayo….
Next articleSawirro & muuqaallo hor leh oo kasoo baxaya qaraxa dekedda Bayruut oo hadda dambas noqotay + sababta qaraxa (Dowladda Israel oo….)